Inkqubo yokwamkelwa koMtshato - Ukwamkelwa Komtshato
Inkqubo yokwamkelwa koMtshato
Ukuba umsitho womtshato uxinekile yimisebenzi, unokufuna ukubonelela iindwendwe ngenkqubo yokwamkela umtshato. Ukuba ufuna inkqubo yolwamkelo lomtshato malunga nendlela umsitho oza kuqhutywa ngayo, cinga ukuchitha ixesha uyila inkqubo ebanzi yolwamkelo lomtshato ukuqinisekisa ukuba yonke imisebenzi ibonakala ilungile kwaye iyonwabisa kubo bonke ababandakanyekayo.
Inkqubo yokuPhathwa koMtshato eshicilelweyo
Le nkqubo yokuprinta yasimahla inokwenziwa ngokwezifiso ngamagama akho kunye nemihla kwaye iya kunceda iindwendwe ziqonde ngokulandelelana kweziganeko kumtshato wakho. Cofa kumfanekiso ukuze ukhuphele iPDF kwikhompyuter yakho. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo,ezi ngcebisoinganceda.
Iifoto zoKwamkelwa koMtshato
Imifanekiso yeGumbi leSidlo seRisithi
Inkqubo yokwamkelwa komtshato enokwenziwa ngokwezifiso
Ukuprinta Inkqubo Yakho Yokwamkela
Nje ukuba ukhuphele ekuprintweni, ukwenza inkqubo kube lula. Uzakufuna umshicileli onokuthenjwa kunye nephepha eliqhelekileyo elinobumba okanye ikhadi eliprintiweyo, kunye nokubala ukuba zingaphi iinkqubo ofuna ukuzenza.
Yenza ngokwezifiso iinkcukacha ngamagama akho, imihla kunye nolunye ulwazi.
Ukuqala, unganqwenela ukwenza inkqubo enye eprintiweyo ukuze uqiniseke ukuba yonke into ijongeka ilungile kwaye iprinta ngokufanelekileyo. Jonga ikopi yovavanyo kwaye wenze naluphi na uhlengahlengiso.
Phrinta inani elifunwayo leekopi.
Sebenzisa isikere okanye umsiki wephepha ukusika iinkqubo.
Ukuprinta iNkqubo yakho ngokobuGcisa
Ukuba awufuni umsebenzi wokuprinta iinkqubo okanye awunayo iprinta oyithandayo, qesha ingcali. Iivenkile ezininzi zokuprinta ziya kuprinta inkqubo yakho kukhetho lwakho lwephepha kubaprinta bebanga labo lobuchwephesha, ikunike inkangeleko ebutofotofo ngakumbi. Oku kunokugcina ixesha.
Iinkqubo zokwamkelwa komtshato zivumela ukonwaba
Inxalenye yokwamkela umtshato lixesha apho umtshakazi nomyeni banokubonisa isimbo sabo kunye nobuntu babo. Ukwamkelwa kuhlala kuhlala kubhiyozelwa kunokwasesikweni, kwaye ukubonelela ngenkqubo echaza indlela yohambo lomtshato kuluncedo kwiindwendwe. Iinkqubo zikwanika ifomathi yolonwabo yokudweliswa kwamagama epati yomtshato, abaphathiswa abasebenza kunye nabanye abathathi-nxaxheba emtshatweni. Xa ipati iphelile, iindwendwe ziya kuba nenqwelomoya yokugcina ekhaya ukubakhumbuza ngezihlandlo ezingalibalekiyo ezivela kulo mhla ukhethekileyo.
Ngokungafaniyo nezinto zokubhala ezisemthethweni zomtshato, ezizezi izimemo, iinkqubo zokwamkela akufuneki zibize kakhulu okanye zibe nzima kakhulu.
Nika i-usher okanye iiseva umsebenzi wokuhambisa iindwendwe xa zifika kwindawo yolwamkelo.
Gcina inkqubo ibekelwe ngokukhuselekileyo ecaleni komtshakazi nomyeni.
Umzekelo woHambo lweeNkqubo zokuMkela uMtshato
Ngelixa ulwamkelo luhlala lubonisa imisebenzi emininzi efanayo, indlela ezenzeka ngayo ihlala ihluka. Ukuba ucwangcisa ukubandakanya into eyahlukileyo kulwamkelo lwakho, njengomdlalo wolwamkelo lomtshato, kuyanceda ukubona imizekelo yendlela yokucwangcisa uhambo oluya kuphela kwinkqubo.
Ukwamkelwa koMtshato weZiganeko # 1
Utata womtshakazi intetho
Eyona ntetho yomntu
Intetho yentetho yozuko
Ukwamkelwa koMtshato weZiganeko # 2
Wamkele esi sibini sitsha
Yintoni enye enokubandakanywa kwiNkqubo yokwamkelwa
Ngaphandle kokuprinta uluhlu lwezinto onokuzilindela kwitheko lomtshato, le nkqubo iya kuvumela umtshakazi nomyeni ukuba babulele iindwendwe kunye namalungu osapho. Ezinye izinto onqwenela ukuzongeza kwinkqubo zezi zilandelayo:
Amagama obulumko avela kooyise bomyeni nomyeni
Idilesi entsha yesi sibini
Amagama abathathi-nxaxheba emtshatweni
Uluhlu lwexesha leziganeko kubandakanya ukusika ikeyiki, ezomlilo okanye ukuphosa irayisi
Inkqubo yeTIps egqibeleleyo
Kwiminyaka ezayo, ukugcinwa emtshatweni njengenkqubo yokwamkela umtshato kuya kuvusa iinkumbulo ezimnandi. Thatha ixesha elininzi kunye nokhathalelo ukwenza inkqubo efanelekileyo yesi sibini sitsha. Kuphephe ukusebenzisa iifonti ezintsonkothileyo ekunzima ukuba zifundwe ngumntu wonke. Njengothintelo, vumela umnxibelelanisi womtshato okanye umtshakazi ukuba aqwalasele kwakhona inkqubo ngaphambi kokuprinta inani elikhulu. Kuhlala kulungile ukuba nesibini esamehlo ukuze ubambe amagama angapelwanga kakuhle okanye ulwazi olungachanekanga.
Uxinzelelo Management Techniques Izinja Imiboniso Yesilayidi Ephakamileyo Isithende Izihlangu Usana Olusandul 'ukuzalwa Umtshato Wokubonisa
ilitye le-amaretto limuncu vs amaretto umuncu
indlela yokwenza amehlo atshayayo
oza kunxiba ntoni ngenqanawa yokuhamba ngenqanawa ebusuku ngokusemthethweni
leliphi icala ekufanele ukuba likuyo ngaphambi kokuba uphumelele
ukucoca njani iiterminal zebhetri kwi-elektroniki
ungayixela njani ukuba isitulo sam sokugungqa siyinto yakudala